Izindaba - Ziyini izici zesibonisi esikhulu se-LED?
Isibonisi esiholwa yiCurtian
Ukubonisa okusobala okungabonakali
Isibonisi se-Digital Visual LED
Isibonakaliso se-LED Esindisa Amandla
I-Creative LED Display Screen
Isibonisi se-Smart Business LED
Yiziphi izici zesibonisi esikhulu se-LED?
1. Isibonisi esikhulu sangaphandle se-LED sakhiwe ngezibonisi eziningi ze-LED eyodwa, futhi iphimbo le-pixel ngokuvamile likhulu ngokuqhathaniswa. Ukucaciswa okusetshenziswa kakhulu ikakhulukazi i-P6, i-P8, i-P10, i-P16, njll. Uma kuqhathaniswa nokubonisa okuncane kwe-LED, inzuzo yesikhala esikhulu iyizindleko eziphansi. Izindleko zesikwele ngasinye sezibonisi ezinkulu ze-LED ziphansi kakhulu kunalezo zokubonisa ama-LED amancane, kuyilapho izikrini ezinkulu zangaphandle ngokuvamile zinebanga elide lokubuka, njenge-8m, 10m, njll., Ukubuka isithombe esikrinini esikhulu kusuka ibanga elide, ngeke kube khona "okusanhlamvu" umuzwa, futhi ikhwalithi yesithombe icacile.
2. Ukusabalala okubanzi nezethameli ezinkulu. Izibonisi zangaphandle ezinkulu ze-LED ngokuvamile zifakwa endaweni ephakeme kakhulu, isikrini sikhulu kakhulu, i-engeli yokubuka nayo inkulu, ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, inkomba evundlile ibukwa nge-engela ye-140 degree yevidiyo, isithombe sisabonakala kahle, okwenza isikrini esikhulu se-LED sibonise okuqukethwe kungafaka ibanga elibanzi futhi kufinyelele izethameli eziningi. Lesi sici esikhulu singesinye sezizathu esenza amabhizinisi amaningi azimisele ukukhetha izibonisi ezinkulu ze-LED zangaphandle ukubonisa okuqukethwe kokukhangisa.
3. Ukukhanya kwesikrini kungashintshwa ngokuzenzakalela. Izikrini ezinkulu ze-LED ezifakwe ngaphandle zizothinteka ngaphandle kwezulu. Isibonelo, ukukhanya kwangaphandle kwehlukile phakathi kosuku olubalele nosuku oluna imvula, futhi uma ukukhanya kwesibonisi kungenakushintshwa ngokuzenzakalela, umphumela uzohluka ngaphansi kwezimo zezulu ezahlukahlukene, noma wehliswe kakhulu. Ukuze ungathinti umphumela wokubuka wezithameli ezihlosiwe, isibonisi sangaphandle esikhulu se-LED sizoba nomsebenzi wokulungisa ukukhanya okuzenzakalelayo, okungukuthi, ngokuya ngezimo zezulu ezingaphandle, ukukhanya kwesikrini sokubonisa kulungiswa ngokuzenzakalela ukufeza ukuboniswa okuhle kakhulu umphumela.
4, okulula ukuyigcina (imvamisa kunokwengeziwe kokugcinwa kokugcinwa, kepha futhi nokunakekelwa kwangaphambi kwesikhathi). Izindleko zokufaka isibonisi esikhulu sangaphandle se-LED aziphansi, kusuka emakhulwini ezinkulungwane kuya ezigidini. Ngakho-ke, ukugcinwa okulula kubaluleke kakhulu ekubonisweni okukhulu kwe-LED. Kubalulekile ukuqinisekisa ukusebenza okuzinzile kwesikhathi eside kwesibonisi. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, izibonisi ezinkulu ze-LED zangaphandle zingagcinwa ngemuva kwalokho, futhi ezinye izibonisi zigcinwa ngaphambi nangemva kwalokho, kulungiswa ngaphambili nangemuva. Isibonelo, i-Huamei Jucai JA uchungechunge lwangaphandle olungisiwe lwe-LED lungafinyelela ukugcinwa kwangaphambili nangemuva.
5, izinga eliphezulu lokuvikelwa. Isimo sangaphandle asilindelekile, kuba namazinga okushisa aphezulu kwezinye izindawo nezinsuku zemvula kwezinye izindawo. Ngakho-ke, izinga lokuvikelwa kwesibonisi esikhulu sangaphandle se-LED sidinga ukuba ngaphezu kwe-IP65 ukuvikela amanzi emvula ukuthi angangeni esikrinini. Lapho ufaka, futhi naka ukuvikelwa kombani, ukufakwa kwe-anti-static njalonjalo.
Ngamafuphi, izibonisi ezinkulu ze-LED zangaphandle ngokuvamile zinezici ezingenhla. Vele, ukuboniswa kwangaphandle okukhiqizwa abakhiqizi be-LED abahlukile kuzoba neminye imisebenzi ehlukile, njengokugcina amandla nokusetshenziswa kwamandla. Kepha izici ezingenhla cishe zonke izikrini ezinkulu ze-LED zinazo. Ngokufika kwenkathi ye-5G, sikholelwa ukuthi izikrini ezinkulu zangaphandle ze-LED zizothuthukisa imisebenzi eminingi nezici ukuhlangabezana nezidingo eziningi zamakhasimende ahlukile.
Isikhathi Iposi: Jul-01-2021
Ikheli: Igumbi 1401, Isakhiwo A, Jiansheng Isakhiwo, Shenzhen, Guangdong, China
Ngicela noma imiphi imibuzo, imibuzo noma ukuncoma